Dungarees, iwe unenge wakafanana navo kana unovenga ivo | Bezzia
Dungarees, iwe unovada kana unovenga
Maria vazquez | 31/05/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Dhibhodhi inguo iyo haasiyi munhu asina hanya. Iko hakuna yepakati nzvimbo, iwe ungaifarire kana iwe unovenga iyo. Mwaka uno wezhizha-zhizha 2021 mwaka, avo vari muboka rekutanga vane mhanza! Hatigone kuti ma bhibhi ndiwo maitiro, asi mhando yekushongedza yatinogona kugadzira kubva kwavari ndeye
Sezvo iwe ungave wakacherekedza, mune mazhinji emafashoni catalogs atakawana mumwedzi wese, nyika manyorerwo inonakidzwa nebasa rakakura. Kunyangwe iyi dhizaini isiri iyo chete nzira yekushandisa mukana webhodhi sezvatinokuudza pazasi.
1 Chimiro chenyika
2 Minimalist yerineni
Iyo gingham inopfeka ine huchi hwe bodice uye shati dzakagadzirwa nemakorari makuru kana kuzvitutumadza kwemaoko, ndidzo dzimwe dzehembe dzekupfeka dzemaitiro aya dzinokonzeresa kutaura kwakawanda mwaka uno kana tikateerera mafemu emafashoni. Uye mabhibhi anova imwe inonakidza nzira yekugadzira zvipfeko zvakabatanidzwa neyekupedzisira.
ari chena denim hovhorosi Ndidzo dzinodiwa kuumbika iyi mhando yekunyora. Zvakare zvinowirirana sezvo uchigona kuzvisanganisa nechero bhurauzi kana hembe ine pateni kana ruvara rwayo. Kuti upedze kutaridzika kwako, iwe unongoda chete shangu dzemumahombekombe kana espadrilles uye bhegi reraffia.
Imwe nzira yekupfeka iyi nguwo muzhizha ndeyekubheja pane yerineni vhezheni Zvimwe chete. Linen bibs inzira nyowani uye yakajeka kuti unakirwe nezhizha. Mune echisikigo kana anodziya mavara, iwe unogona kuawana iwo mumakataro emafashoni mafemu ayo anowanzo sarudza ichi chinhu.
Aya mabhandi emucheka, kusiyana nemabhabhoni ekotoni atakambotaura nezvake pakutanga, akabatanidzwa nawo misoro yakapusa: michero yepamusoro kana t-shirts ekutanga mune chena. Kazhinji, aya masitayera madiki anopedzwa neshangu dzefoshoro dzerudzi.
Unofarira hovhorosi here? Une chero?
Mifananidzo - @mariagarridoest, @mirenalos, @jessiekass, @autroraartacho, @carlotaweberm, @itziaraguilera, @indie_home, @nereaalos, @candicemtay
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Dungarees, iwe unovada kana unovenga